Maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay inuu Burburay wadahadalkii Ahlu-suna | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada News Maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay inuu Burburay wadahadalkii Ahlu-suna
Maamulka Galmudug oo ku dhawaaqay inuu Burburay wadahadalkii Ahlu-suna
Thursday, April 27, 2017 Bulshada , News Edit
Bulsha:- Guddiga Galmudug u matalayay Wada hadalada ayaa goor dhow ku dhawaaqay inuu bur buray Wada Hadaladii ay la lahaayeen Ahlusuna ee ka socday magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Guddiga wada hadalka Galmudug, ahna Wasiirka Dastuurka iyo Dib u heshiisiinta Cusmaan Maxamed Cali ayaa sheegay in dhinaca Ahlusuna ay wax ka socon waayeen.
“Wada hadaladii waa istaageen, dhowr kulan oo aan galnay anaga iyo dowladda meel fiican isla gaarnay, waa nala soo dhoweysay, laakiin Ahlusuna ayay wax ka socon waayeen”ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga wada hadalka.
Waxaa uu sheegay in Ra’iisul Wasaaraha uu dhowr jeer isku dayay in dadaalo looga mira dhalinayay wada hadalka, balse ay ka dhega adeegeen Ahlusuna, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dowladda ay ku wargelisay in Ahlusuna dhankooda wax ka socon la’yihiin, sidaas darteed maamulkooda ay ku dhaqaaqayaan howshooda ah doorashada Madaxweynaha oo dhici doonta 30-ka bishan.
Ahlusuna ayaa watay qodobo dhowr ah oo shuruudo, sida in marka hore iyaga lagu soo biiro, in xilal laga siiyo dowladda federaalka, in Baarlamaanka Galmudug xubno ku yeeshaan iyo shuruudo kale.